Sajhasabal.com |२४ दिनपछी म्यानपावरको शंख्या १५० मात्रै ?
२४ दिनपछी म्यानपावरको शंख्या १५० मात्रै ?
साउन २६, काठमाडौँ | सरकारले धरौटी वृद्धि तथा म्यानपावर संचालनको लागि कडा नीति लिएसँगै म्यानपावरको शंख्या घट्ने निश्चित छ । तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा बैदेशिक रोजगारमा पठाउनमा सकृय म्यानपावरको शंख्या ७८१ मात्र रहेपनि हाल १२५० म्यानपावर बैदेशिक रोजगार बिभागमा दर्ता रहेका छन् ।
एक व्यवसायीका अनुसार भदौ १८ पछी म्यानपावरको शंख्या अहिलेको शंख्याको आधाभन्दा बढी हुनेछ । ति व्यवसायीका अनुसार म्यानपावरको शंख्या धरौटी पछि घट्ने निश्चित भएपनि डेढ दुईसय नभई ५ सयदेखि ७ सयको शंख्याको हाराहारीमा हुनेछ । ति व्यवसायीका अनुसार धरौटी तथा मर्जको लागि तोकिएको समय एक महिना भन्दा कम रहंदा धरौटी अघिनै मलेसियाको रोजगार खुलेको खण्डमा धरौटी राख्ने म्यानपावर शंख्या बढ्नेछ । उनले भने 'मलेसिया नखुले वा खुल्ने ग्यारेन्टी नहुँदा त्यसले धरौटी राख्ने ५० भन्दा बढी म्यानपावरको शंख्यामा हेरफेर हुनेछ ।'
एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए अनुसार आफूसंग धरौटी राख्न पैसा नभएपनि मर्जमा जाने सोच नबनाएको बताए । उनले भने 'कसलाई विस्वास गरेर मर्जको लागि कुरा अगाडी बढाउँ, आफै अन्यौलमा छु । पार्टनरसिपमा म्यानपावर संचालन गर्दा भोली ठूलो समस्या पर्ने मेरो डर छ ।' यी व्यवसायीको कुरालाई लिने हो भने धेरै म्यानपावर संचालकसंग उनको कुरा मिल्दो-जुद्दो छ ।